Abụ Ọma 126 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
A kpọlatara ndị Zayọn a dọọrọ n’agha
“Jehova emeerela anyị nnukwu ihe” (3)
Ndị na-ebebu ákwá tiri mkpu ọṅụ (5, 6)
Abụ Mgbago. 126 Mgbe Jehova kpọlatara ndị Zayọn a dọọrọ n’agha,+Ọ dị anyị ka ọ̀ bụ ná nrọ. 2 Ọchị juru anyị ọnụ n’oge ahụ,Anyị nọkwa na-eti mkpu ọṅụ.+ N’oge ahụ, mba dị iche iche nọ na-asị: “Jehova emeerela ha nnukwu ihe.”+ 3 Jehova emeerela anyị nnukwu ihe,+Obi bụkwa anyị sọ aṅụrị. 4 Jehova, biko, kpọlata ndị obodo anyị a dọọrọ n’aghaOtú mmiri ozuzo si asọba n’iyi ndị dị na Negeb.* 5 Ndị ji anya mmiri na-agha mkpụrụGa-eji mkpu ọṅụ ghọrọ ihe mkpụrụ ha mepụtara. 6 Onye bu mkpụrụ ọ ga-aghaBere ákwá na-aga n’ubiGa-ebu ọka* n’ùkwù n’ùkwù+Tiri mkpu ọṅụ lọta.+